Maalinta: Meey 22, 2020
IETT waxay sii wadi doontaa qaadista rakaabka inta lagu jiro fasaxa. Maalmaha ciidaha ee laga isticmaali doono bandoowga, rakaabka waxaa lagu qaadi doonaa khadadka basaska sida ku xusan jadwalka maalinta Sabtida iyo maalmaha kale sida ku xusan jadwalka axada. Isbitaallada [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhameystirtay u diyaar garowga Ciidul Fitriga. In kasta oo shaqooyinka nadaafadda lagu qabto qabuuraha iyo sidoo kale jidadka iyo jidadka loo yaqaan Başkent, kooxaha Qaybta Booliska waxay baaraan cuntada gaar ahaan shirkadaha soo saara macmacaanka. [More ...]
Sida ku xusan talaabooyinka laga qaadayo cudurka dilaaga ah ee coronavirus (Covid-19), bandoowga waxaa lagu soo rogi doonaa 23-26 Meey 2020, sida ku xusan go’aanka Gudoomiyaha Gobolka Ankara, HIFZISSIHHA, taariikhdeedu tahay 21.05.2020 waana tirakoob 2020/37. [More ...]
Wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa sheegay in dhamaan wasaaradaha ay qaadeen talaabooyin kala duwan oo ku aadan la dagaalanka cudurka Covid-19 oo ka bilaawday Shiinaha kuna noqday masiibo adduunka. Gaadiidka iyo markan [More ...]
Marka la eego baaxadda dagaalka lagula jiro cudurka dilaaga ah ee coronavirus, ka dib bandowga lagu dhawaaqay 23-24-25-26 May, inta lagu gudajiray bisha Ramadaan, Degmooyinka Magaaladu waxay dhameystireysay talaabooyinka iyo diyaarinta. Duqa Magaalada Muhittin Böcek, Ramadaan barakeysan [More ...]
Guddoomiyaha Cayayaanka wuxuu baaray shaqooyinka Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek wuxuu baaray howlaha kaabayaasha ee Meltem Boulevard iyadoo laga duulayo Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad. Helitaanka macluumaadka ku saabsan daraasadaha socda, Madaxweyne Insect, [More ...]
Kooxaha Qeybta Booliska Magaalada Kocaeli ee Magaalada Kocaeli waxay si adag u shaqeeyaan si loo hubiyo nabada iyo kala dambeynta guud qeybo badan oo magaalada ka mid ah. Kooxaha taraafikada booliiska waa khalad in laga hortago qulqulka taraafikada magaalada oo dhan [More ...]
Metro, waa dhiiga nololeed ee gaadiidka dadweynaha ee Izmir, waa 20 jir. Nidaamka ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa xambaaraya ku dhawaad ​​nus milyan rakaab ah maalintii oo wata khadadka taraamyada. Izmir Metro, oo ka bilowdey 22-kii Maajo 2000 magaalada Izmir, [More ...]
Midowga Dawladaha Hoose ee Marmara iyo Kocaeli Metropolitan Municipal Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu baaray howlaha dhismaha Jidka mitirka Gebze-Darıca, oo loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, 52 mitir oo dhulka ka hooseeya. Aasaaska Kocaeli [More ...]
Nidaamka Isgaarsiinta Satalaytka Dayax gacmeedka Ku-Band, kaas oo loo bilaabay in lagu daboolo baahiyaha isgaarsiinta ee ka baxsan-aragtida aragtida diyaaradda Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga waxaana lagu sameeyay baaxadda mashruuca R&D ee is-miidaaminta, [More ...]
Guddiga La-Talinta Sayniska ee IMM ayaa daabacay warbixin ku saabsan 'Marxaladaha Furitaanka ee Istanbul'. Warbixinta; Turkiga waa hoos u dhaca tirada dhimashada guud ahaan; hase yeeshee, waxaa la sheegay in aysan jirin xog caafimaad qabta oo la xiriirta Istanbul. Caadi ahaan warbixinta [More ...]
Khudbaddiisii ​​xafladda KIPT Silivri Heerka 3-aad Kura Lottery Ceremony, madaxweynaha İBB Ekrem ğmamoğlu wuxuu ka yeeray baaqa soosocday maareeyaha guud Cali Kurt: Waxaan tagnaa halkaas [More ...]
Baadhitaan ayaa la bilaabay si loo ogaado saamaynta geedi socodka faafa ee habdhaqanka rakaabka iyo taraafikada Istanbul. Daraasadda ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa in lagu go'aamiyo caadooyinka cusub iyo falanqaynta habdhaqanka rakaabka ka dib dillaaca. Nidaamyada Gaadiidka Jaamacadda Ganacsiga ee Istanbul [More ...]
Bayaanka uu soo saaray xubin ka tirsan guddiga BMC Taha Yasin Öztürk, nooca ugu dambeeya ee BMC Tulga ayaa la soo bandhigay. Taha Yaasiin Öztürk ayaa tiri, “Hawshan adag, waxaan soo saarnay annagoo tixgelinayna baahiyaha shaqaalaheena amniga gudaha. [More ...]
Kadıköy Ferry Boat waa la cusboonaysiiyay kor ilaa kor
Kadıköy-2 (Cusub) Ferry Port waxaa laga cusbooneysiinayaa kor iyo hoos. Isagoo sheegay inay rabaan inay u adeegsadaan meerayaasha goob ay ku nool yihiin iyo wax qabad, Maareeyaha Guud ee Magaalada AŞ Maareeyaha Guud Sinem Dedetaş wuxuu sheegay inay bilaabi doonaan howlo dib u cusboonaysiin ah goobaha kale. [More ...]
Covidien-19 dhamaan tilaabooyinka lagu qaaday baaxadda dalka Turkiga cudurka dartiis, laga soo bilaabo Xaawo ilaa waddooyinka oo ay qaadan doonaan 4 maalmood waxayna Ramadaanka ku qaadan doonaan guriga. Istanbulites oo leh bandow lagu dhaqan gelin doono inta u dhexeysa 23-26 May [More ...]
Mashruuca 'Shabakadda Taageerada Xirfadda leh ee Shabakada' oo ay soo saartay ASELSAN ayaa caddeysay bisaddeeda 'Duulaankii' EURASIAN STAR'19 NATO. EURASIAN STAR (AFRIKA) 2019 Jimicsiga, Taliska 3aad ee Ciidanka, sagaal iyo toban magaalada Istanbul oo leh Taliska NATO iyo Qaab dhismeedka Ciidamada. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay diyaarisay xirmo xaflad si ay niyaddooda u siiso ka hor Ciidda Ramadaanka. Xirmooyin ayaa loo qaybin doonaa 60 kun oo reer Izmir ah oo ka weyn 10 jir. 60 jir ayaa fasaxa si gooni gooni ah uga qaata kuwa ay jecel yihiin bandowga darteed [More ...]
Karsan, si loo kordhiyo waxtarkiisa suuqa basaska korontada, Bozankaya Dhamaan xuquuqda diiwaangelinta waxaa diyaariyey basaska gawaarida iyo korontada kuwaas oo leh xuquuq gaar ah oo lahaanshaha milkiilaha, oo ka diiwaangashan Turkey iyo suuqa caalamiga iyo [More ...]
Golaha cilmi baarista Sayniska iyo Teknolojiyadda ee Turkiga (TUBITAK) 15ka qof ayaa la shaqaaleysiin doonaa. Sida ku xusan ogeysiiska rasmiga ah ee Gazette, 11 R&D shaqaale ah oo ka shaqeeya Machadka Cilmi-baarista ee Teknolojiyada Space (UZAY), [More ...]
Bandoojinta waxaa lagu soo rogi doonaa habeenka Ramadaanka iyo Ciidda Ramadaanka. Hawsha daboolaysa 23-26 Meey; Basaska ESHOT, Metro iyo TCDD-İzmir waxay bixiyaan adeegyo gaadiid dadweyne oo loogu talagalay kooxaha xirfadlayaasha ah iyo shaqaalaha dowladda. [More ...]
Macluumaad saxaafadeed ayaa lasiiyay tillaabooyinka la qaaday, howlaha socda iyo arrimaha ajandaha Wasaaradda Difaaca Qaranka, gaar ahaan la dagaallanka argagixisada, ka hortagga cudurka COVID19. Macluumaadka ku diyaarsan qaab muuqaal ah fiidiyowga sababtuna tahay dillaaca COVID-19 [More ...]